पोखरामा कोरोना कहर बढ्दो, फेरि १ जनाको मृत्यु — donnews.com
पोखरामा कोरोना कहर बढ्दो, फेरि १ जनाको मृत्यु
पोखरा । कोरोना संक्रमणको कारण पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ का ६२ वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक सह.प्रा.डा. अर्जुन आचार्यले भर्खरै जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार ती महिलाको आज विहान ८ बजे मृत्यु भएको हो ।
ती महिलालाई कार्तिक १३ गते कोभिड–१९ भई उपचारका क्रममा आईसियुमा भर्ना गरिएको थियो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अनुसार ती महिलाको कोभिड–१९, निमोनिया टाईप–२ डाईबिटिज मलईटस लगायतका समस्याहरुका कारण मृत्यु भएको हो । यसरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कोभिड–१९ का कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने उनी २३ औं संक्रमित हुन् ।
पोखरामा दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमणको कहर बढ्दै गईरहेको छ । तर यसको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार लगायत पोखरा महानगरपालिका लगायत सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने काम भने ज्यादै नै न्यून र विजोग अवस्थामा रहेको छ । यस विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चर्चा मात्र बटुल्ने तर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।